NY FIHETSIKAO REHEFA MIHETSI-JAZA | Univers féminin et de la Mode à Madagascar
NY FIHETSIKAO REHEFA MIHETSI-JAZA
Marary tokoa ny mihetsi-jaza.
Voalohany aloha dia tokony efa voahomana tsara daholo ny entana hoentina mamonjy hôpitaly dieny mbola tsy mihetsika ny zaza izany hoe rehefa manomboka ny hoe « miandry andro » ianao dia tokony efa vonona tsara daholo ireo.
Rehefa nipoitra taminao daholo ary ny fambara fa ho teraka ianao dia tokony halamina tsara ny saina
Tsy mieritreritra zavatra hafa intsony fa ny hahateraka sisa no mibahana ny saina.
Misy moa ireo toeram-piterahana no efa manome fampiofanana mialoha ny amin’ny tokony atao rehefa mihetsi-jaza.
Dia arahina antsakany sy andavany daholo ireny mba ho moramora kokoa ny famoahana ny zaza.
Tokony ho mby ao an-tsainao fa hahazo zazakely ianao ka hafaliana no handrasanao fa tsy fahatahorana ny hamafin’ny fanaintainana.
Ataovy masaka tsara ao an-doha fa tsy maintsy marary ny mihetsi-jaza. Misy moa ireo mifidy ny mitsindrona alohan’ny fotoana mba tsy dia ahenoina be loatra izay marary izay dia ny péridural izany.
Tsy azo atao ny mandeha matory fa sao matory miaraka aminao koa ilay zaza ka tsy hanana hery hivoahana.
Manao respiration tsara ianao mba hidinan’ny lohan-jaza tsara.
Rehefa manomboka ny contraction, izany hoe ilay marary ao amin’ny lamosina sy ny kibo, dia mi-inspirer mafy sy miadana ianao, ary mi-expirer hatramin’ny farany ihany koa fa iny mamoaka rivotra iny no tena mampidina ny lohan-jaza.
Vetivety kokoa amin’izay ny fihetsehan-jaza.
Afaka misotro rano mafana mamy ianao mandritra izany.Izany moa dia atao mandra-pahatonganao any amin’ny toerana fiterahana ihany fa rehefa tonga any indray ianao dia ny mpampivelona na ny sage-femme no manoro anao izay tokony atao.
Fa mahaiza misafidy tsara ny toerana fiterahana izay tena mikarakara tsara.
Marihina moa fa tsy tokony ianao hitondra ny fianakaviana rehetra rehefa hiteraka satria manaela kokoa ny fahaterahan’ny zaza izany fa ianareo mivady dia ampy tsara miatrika izany fiterahana izany, manelingelina tokoa satria tsy ilaozan’izay tsy hiresadresaka amin’ny havanao ianao ary tsy hifantoka tanteraka amin’ny fiterahana mazava ho azy ny fisainanao.
Ka na dia tokony hanao respiration tsara aza ianao dia lasa lany fotoana miresaka indray. kanefa moa dia araka ny safidin’ny tsirairay ihany.
Torohevitra avy aminy Mme Felana Nirina Yvonne
Afaka manjifa ny boky novokariny ihany koa ianao
Misy karazany 3 :
1-TOROHEVITRA MOMBAN’NY FAHASALAMAKO SY NY ANKOHONAKO
2-TOROHEVITRA MAHASOA MOMBAN’NY RENY SY NY ZAZA
3-BOKY FIANARANA KABARY
TOROHEVITRA MOMBA NY FAHASALAMANA